कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ? « हाम्रो ईकोनोमी
केन्द्रका अस्पतालमा धेरै चाँप हुने भएकोले सहरबाट अलिकति बाहिरका मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यहाँ बिरामीको चाँप कम हुन्छ । काठमाडौ बाहिरका अस्पतालमा पनि उपचार राम्रो छ । तसर्थ आफ्नो ठाउँको अस्पताल छोडेर काठमाडौ आउनु जरुरी हुँदैन । उपचारको गाइडलाइन उही नै हो ।